ဗေဒင် Archives - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
ပိုက်ဆံက ရှာသလောက် မလောက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုသူများ ဒီနည်းလမ်း (၇) ခုကို အသုံးပြုကြည့်ပါ
ပိုက်ဆံက ရှာသလောက် မလောက်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုသူများ ဒီနည်းလမ်း ( ၇ ) ခုကို အသုံးပြုကြည့်ပါ။ မိမိ ရှာနိုင်သလောက်ငွေကို မကုန်အောင်သုံးတဲ့ နည်းလမ်း ( ၇ ) ခု…။ တန်ဖိုး ရှိလိုက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေပါ။ ရှာနိုင်တာထက် လျှော့သုံးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၇)ခု ရှာနိုင်တာထက် လျှော့သုံးနိုင်ဖို့ နည်းလမ်း(၇)ခုစီးပွားရေး, အောင်မြင်ရေး
မဂ်လာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မှန်လွန်းလို့ ထိန်းသိမ်းခံ ထားရတဲ့ ထိုင်းဆရာတော်ရဲ့ သိန်းတစ်ရာတန် 3လုံးထီဒိုင်ကွဲ ဂဏန်းရပြီ အောက်ဆုံးပါ ၇ရက်သားသမီး အားလုံးရစေဖို့ တင်ပေးထားပါတယ်။-11-2021 မှာထွက်ရှိမဲ့ 3D ဒဲ့ပေါက်ဂဏန်း ဒဲ့(1)ကွက် အပိုင်ချပေးနေပါပြီနော် သိန်း(100)တန်ထိုင်း vip ကဒ်အစစ်ပါ အနီးကပ် ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ ဒီအပင် ဒီအကြိမ်မှာ ချဲပေါက်ချင်သူ မှန်သမျှ ပေါက်ဖူးသွားစေရမယ်
သေမည့်နေ့ကိုရွှေ့ပစ်နိုင်သောကုသိုလ်ကောင်းမှု ၆ မျိုး
သေမည့်နေ့ကိုရွှေ့ပစ်နိုင်သောကုသိုလ်များ… မြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှား ရှိစဉ်က ဗေဒင်ကျွမ်းကျင်သော ပုဏ္ဏားမိသားစုရှိရာတွင် ပုဏ္ဏားကြီးသည် ။ မိမိကိုယ်ကို ဗေဒင်တွက်ကြည့်ရာ အသက် (၆၀)ပြည့်သည့်နေ့တွင် သေရမည်ကို သိလေ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားကို မကိုးကွယ်သော်လည်း သေရမည်ကို ကြောက်လန့်၍ ဘုရားထံ သွားလေ၏။ ဘုရားရှင်ထံရောက်သော် မြတ်စွာဘုရားက ” မှန်၏။ အသက် (၆၀) နေမွန်းတည့်ချိန်တွင်
ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့ သူတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ လက္ခဏာများ
ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့ သူတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ လက္ခဏာများချမ်းသာသူတွေရဲ့လက်မှာသာတွေ့ရများတတ်သောလက်ဝါးပြင်ပေါ်မှငွေဝင်လမ်းကြောင်အမှတ်သားလူတိုင်လူတိုင်သည်ချမ်းသာချင်ကြ၏သို့သော်လူတိုင်းလူတိုင်းသည်ချမ်းသာချင်းတော့မရှိနိုင်ပေလူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဆင်းရဲချင်းချမ်းသာချင်းသည်မိမိအတိတ်ကပြုခဲ့ဖူးသောကံတရားအတိုင်းသာခံစားရပေသည်။ထို့ကြောင်အသက်ဉာဏ်စောင်ဥစ္စာကံစောင်ဟုမြန်မာစကားပုံရှိနေချင်းပင်ဖြစ်သည်လက္ခဏာပညာရပ်တွင်လက်ပုံစံတနည်းလက်ဝါးပြင်သည်မူလဇာတာနှင်တူပြီး၊လက်ဝါးပြင်အတွင်းရိုက်နှိပ်ထားသောလမ်ကြောင်းလေးများကတော့ကောဇာဂြိုဟ်နှင့်တူလှသည်လက်ပုံစံကောင်းမွန်ပြီးလက်မအဆင်မှီကာကောင်းမွန်သောလက်ချောင်လေးများနှင်အတူလက်ဝါးပြင်အရောင်အသွေးကောင်းမွန်ကာဂြိုဟ်ခုံလေးများမို့မောက်ပြည်ဖြိုးကောင်းမွန်ပြီး၊ဖျက်မှတ်ကင်းကာအားရှိနေမည်ဆိုပါကလက္ခဏာရှင်သည်ချမ်သာရန်ကံတရားပါရှိပြီးသူဖြစ်ပေသည်။ထိုပြင်အောက်ပါအမှတ်လက္ခဏာများကလည်းငွေကြေးရှာဖွေရလွယ်ကူချင်စီးစိမ်ဥစ္စာပြည်စုံချင်းကိုဖော်ပြပြီး၊ချမ်သာသောလူတွေရဲ့လက်မှာသာအတွေ့ရများသောငွေဝင်လမ်းကြောင်းတွေဖြစ်တာကြာင်ဒီအမှတ်သားလေးများသင့်ရဲ့လက်မှာပါမပါသေချာလေ့လာကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍သင့်ရဲ့လက်မှာသာဒီအမှတ်သားတခုမဟုက်တခုပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်၊သင်သည်လည်းငွေကြေးဥစ္စာပြည့်စုံပြီးချမ်သာသူတယောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာအသေချာပါပဲ။(၁)=လက်သူကြွယ်လက်ချောင်းနှင့်လက်ချောင်းခြေရင်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွဂြေိုဟ်ခုသည်ချမ်းသာကြွယ်ဝချင်းအနုပညာအောင်မြင်မှုစသည်တို့ကိုဖော်ပြသောလက်ချောင်းဖြစ်သည်ထိုလက်ချောင်းခြေရင်းတနင်္ဂနွဂြေိုဟ်ပေါ်တွင်ကြယ်အမှတ်သား(A)ပါခဲ့မယ်ဆိုရင်၊လက္ခဏာရှင်သည်စီးစိမ်ဥစ္စာပြည့်စုံချင်းငွေကြေးရှာဖွေရလွယ်ကူချင်းဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးရရှိချင်းအစိုးရဝန်ထမ်းများရာထူးတတ်ချင်းအနုပညာရှင်များအကယ်ဒမီရလွယ်ချင်းတို့ကိုပေးစွမ်းပြီး၊သာမာန်လူတွေမှာပါခဲပြီးအောင်မြင်ချမ်းသာသူတွေရဲ့လက်မှာသာတွေ့ရများသောအမှတ်သားဖြစ်သည်။ထိုအမှတ်သားပါသောလက္ခဏာရှင်သည်တမိပေါက်တယောက်ထွန်းဆိုသကဲ့သို့ ကြီးပွားမည့်အမှတ်သားလက္ခဏာဖြစ်ပေသည်။ (၂)=လက်သွယ်ကြွယ်ခြေရင်းတနင်္ဂနွဂြေိုဟ်ခုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာလေးမှာအလံပုံစံ(B)လေးပေါ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီအမှတ်သားကိုအောင်လံအမှတ်သားလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီအောင်လံအမှတ်သားပါလာတဲ့လက္ခဏာရှင်ဟာမိဘမျိုးရိုးစဉ်ဆက်ချမ်းသာကြွယ်ဝတတ်ပြီးငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်တဲ့လူတွေရဲ့လက်မှာသာတွေ့ရတတ်တာကြောင့်ဒီအမှတ်သားသင့်လက်မှာပါလာရင်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အမှသားချမ်းမဲ့အမှတ်သားအဖြစ်မှတ်ယူရပါလိမ်မယ်။(၃)=ဦးခေါ်င်လမ်ကြောင်းနဲ့ဉာဏ်လမ်းကြောင်းကြားမှာအောင်လံအမှတ်သားCပါလာရင်တော့သင်ဟာမိဘမျိုးရိုးကချမ်သာသူမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အချိန်တန်အရွယ်ရောက်ကိုယ်လမ်ကိုယ်လျောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်ဘဝအထွဋ်ထိပ်ရောက်ကငွေကြေးဥစ္စာပြည့်စုံချင်နှင်အတူချမ်သာသုခရရှိနိုင်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ (၄)=လက်မပထမဆစ်နဲ့ဒုတိယဆစ်ကြားမှာ(D)စပါးစေ့ကဲ့သို့လမ်ကြောင်တွေဟာလူအတော်များများမှာပါလာတတ်ပါတယ်။ဒီစပါးစေ့အမှတ်သားပါသူတွေဟာစားဝတ်နေရေးပြည့်စုံချင်းငွေကြေးရှာဖွေရလွယ်ကူချင်းပြဆိုပါတယ်။ဒီအမှတ်သားကတော့လူတရာမှာရဝ%လောက်ပါတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအများရဲ့လက်မှာတွေ့ရတဲ့စပါးစေ့ပုံကတော့အတွင်းထဲမှာဟနေချင်းသို့မဟုက်၊အပြင်ဘက်မှာဟနေချင်းသို့မဟုက်အပေါ်တချမ်းအောက်တချမ်းကွဲနေတတ်ပြီးလမ်းကြောင်းနှစ်ခုဆက်ပြီးလုံနေတဲ့စပါးစေ့ကတော့ရှာမှရှားပါပဲလက်မပထမဆစ်နဲ့ဒုတိယဆစ်ကြားမှာပါလာတဲ့စပါးစေ့ဟာဟချင်းကွဲချင်းမရှိလောက်အောင်လှပပြီးလုံနေမယ်ဆိုရင်ငွေလည်းရှာနိုင်သူရှာနိုင်သလောက်လည်းစုဆောင်နိုင်သူဖြစ်တာကြောင့်၊အဲဒီလိုလှပပြီးလုံနေတဲ့စပါးစေ့ကတော့ချမ်းသာသူတွေရဲ့လက်မှာသာမြင်တွေ့ရတတ်တာကြောင့်သင့်ရဲ့လက်မှာသာထိုအမှတ်သားပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်၊သင်ဟာငွေကြေးဥစ္စာပြည့်စုံပြီးချမ်းသာသူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ (၅)=တနင်္လာဂြိုဟ်ခုံလို့ခေါ်တဲ့လက်ဝါးစောင်းနားလေးမှာအလံကဲ့သို့အမှတ်သားလေးပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်၊Eလက္ခဏာရှင်ဟာအနုပညာစိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းမွန်းချင်းကြောင့်အကြံကောင်းတော့တသက်ကံကောင်းတော့တချက်ဆိုသလိုအကြံကောင်ဉာဏ်ကောင်စိတ်ကူးကောင်းတွေကြောင့်ပွပေါက်တိုးကာငွေကြေးဥစ္စာရရှိပြီး၊ကြည့်ကြည့်တတ်ချမ်းသာသူတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။(၆)=အသက်လမ်းကြောင်းအဆုံးမှာစမူဆာပုံစံတြိဂံအမှတ်သား(F)လေးပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်၊မိဘတွေပေးအပ်သောအမွေအနှစ်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေရရှိနိုင်ပြီးမိဘကျေးဇူးမြင့်မိုရ်ဦးဆိုသလိုမိဘတွေရဲ့အထောက်ပံ့တွေနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာမဲ့လက္ခဏာပါပဲ။ (၇)=လက်ဝါးအောက်ခြေလက်ကောက်ရစ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာစမူဆာပုံစံတြိဂံအမှတ်သား(G)နှင့်ကြယ်စုံစံအမှတ်သား(H)ပုံပါလာခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ငွေအစုလိုက်အပြုလိုက်ဝင်ချင်းအမွေရချင်းထီပေါက်ချင်းစသောငွေကြေးဥစ္စာအလုံးလိုက်အရင်းလိုက်ရရှိပြီး၊ငွေကြေးကံကောင်းကာ ချမ်းသာသောဘဝအောင်မြင်သောဘဝကိုဧကန်မုချရရှိနိုင်ပါလိမ်မယ်သင်ရဲ့လက်မှာဒီအမှတ်သားတွေပါမပါသေချာလေ့လာတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ရန်တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခပြောခဲ့တဲ့ စီးပွားရှာသူတိုင်း မဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ့် နည်းလမ်း (၇)ခု ၁. မင်းပိုင်တဲ့တောင်းထဲမှာ ကြက်ဥ ၁ဝလုံး ရှိတယ် တစ်နေ့ကို ၉လုံးစားပြီး ၁ လုံးချန်ထားလို့ ၁ဝရက်ကြာရင် ဘာဖြစ်မလဲ။ ကြက်ဥ ၁ဝလုံး ရောက်နေပြီပေါ့ တစ်လုံးလျှော့စားလိုက်တဲ့အတွက် မင်းလည်း ဘာမှ မသိသာပါဘူး။ ဆိုလိုတာက အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဝင်ငွေ ၁ဝပုံ
၆ရက်အတွင်း ငွေဝင်စေရန် ကုသိုလ်ပြု ယတြာ 19.12.2021 ကနေ 24.12.2021 အထိ (၆)ရက်စာ အစွမ်းထက် ငွေဝင် ကုသိုလ်ရေး ယတြာ မြတ်စွာဘုရားကို နေ့စဉ် ကပ်လှူရသော အကျိုးဟာစိတ်အေးချမ်းသာပြီး ကုသိုလ်များရရှိစေပြီး စိတ်ချမ်းသာစေပါတယ် အစစအရာရာ ငွေဝင် အဆင်ပြေကြပါစေ ​(၇)ရက်သားသမီးအားလုံး ကုသိုလ်ပြုလို့ရအောင် ရှယ်ယား ထားပါ မျှဝေ ပြီးမှ
၁၇ရက်နေ့ ​ဖယောင်းတိုင် အဖြုရောင် (၆) တိုင်။(၆)တိုင်လုံးကို ညာဘက်လက်နဲ့ကိုင်ပြီး သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာ(၆)ခေါက်ရွတ်ပါ ပြီးရင် ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ကိုင်ပြီး ဂုဏ်တော်(၉)ပါး (၆)ခေါက်ရွတ်ပါ။(၅)တိုင်ကို မြတ်စွာဘုရားကို ပူဇော်လိုက်ပါ။ကျန်တဲ့ (၁)တိုင်ကို မိမိပိုက်ဆံအိတ်အပေါတွင် တင်ထွန်းပါ။ဆီမီးခွက်ပေါတင်ထွန်းလဲရပါတယ်။ ရှဲယား မျှဝေပြီးမှ ယတြာပြုလုပ်ဆောင်ရွတ်ပေးပါ ယတြာလဲ ပိုအစွမ်းထက်သလို ငွေလဲပိုဝင်လာစေပါတယ်။ဆရာစီက ငွေဝင်အိတ်ဝယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ ဆရာငွေဝင်အိတ်ပေါတွင်တင်ထွန်းပေးပါ။မဝယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ မိမိရှိတဲ့ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ပဲ ယတြာလုပ်လို့ရပါတယ် မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအား
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများတို့သည် နှစ်ကူးစ စိတ်သစ် ကိုယ်သစ်နှင့် စိတ်ကူးသစ်ဖြင့်၊ အလုပ်များ ဆောင်ရွက်ရမည်။နိုင်ငံခြားခရီး သွားလာခြင်းများ ကြုံလာတတ်သည်။ မိမိခန့်အပ်ထားသော အတွင်းလူများနှင့် ဆက်ဆံရေးတွင် ပြဿနာ ပေါ်ပေါက်လာတတ်သည်။ငွေကြေးနှင့် အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ ကျပျောက်တတ်သည်။ယခုနှစ်တွင် (16. 1. 2022 မှ စ၍ ( 16. 4. 2022) အထိ မိမိ လုပ်ငန်းခွင်များ
( ၇ )ရက် သားသမီးများအတွက် ဒီဇင်ဘာလ တစ်လစာ အထူးဟောစာတန်းကြီး
တနင်္ဂနွသေားသမီး တနင်္ဂနွသေားသမီးများ အရာရာသေချာစဉ်းစားချင့်ချိန်ပါလွယ်လွယ်ကူကူမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့အရာရာမှာမျှမျှတတဆက်ဆံပါမေတ္တာရေးမှာမကြာခနစကားမျာရန်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အမှုအခင်းလေးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အာမခံပေးခြင်းစာချုပ်စာတမ်းငွေပေးငွေယူဂရုစိုက်ပါ ဒါကလဲမိမိဘက်ကမှန်ရင်အောင် မြင်ပါလိမ့်မယ်အပြောင်းအရွှေ့လေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ဒီကာလမှာစိတ်ပူစရာပူပင်သောကရောက်စရာပူလောင်စရာ၊စိတ်ညစ်စရာကိစ္စလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငွေဝင်ကိန်းလေးတွေရှိပါတယ်၊၊ယတြာဘုရားမှာပဲဟင်းသို့မဟုတ်ပဲနဲ့ပက်သတ်တဲ့ကပ်လှူဆုတောင်းလိုက်ပါ။ တနလာ်သားသမီး တနလာ်သားသမီးများဒီကာလမှာတော့အလုပ်သစ်နေရာအသစ် ပြောင်းရွှေ့ကိန်းတွေရှိပါတယ်အိုအိမ်အိမ်သာရေပိုက် ရေပိုက်ရေကန် ပြုပြင် ရတတ်တယ်လုပ်လက်စလုပ်ငန်များပြန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်မယ်လုပ်ငန်းတွေလဲတိုးချဲ့ရတတ်ပါ။တယ်မိမိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလဲမှန်ကန်နေရတတ်ပါတယ်မေတ္တာရေးမှာအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ချစ်သူမရှိသူချစ်သူရမယ်အရာရာအစမှ ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ရတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာစိတ်တွေလေနေရတတ်ပါတယ်စိတ်တွေညစ်နေရတတ်တယ်ဂရုစိုက်ပါ။ ယတြာဩဇာသီး၁လုံးဘုရားကပ်၍ဆုတောင်းလိုက်ပါ။ အင်္ဂါသားသမီး အင်္ဂါသားသမီးများဒီကာလမှာဘာလုပ်လုပ်အပြိုင်အဆိုင်အနောက်အယှက်တွေများမယ်အတားအဆီးတွေများမယ်အရာရာတိုင်းမှာနှစ်ခုကဆန်ကျင်နေတတ်တယ်စိတ်နှစ်ခွဖြစ်နေရတတ်တာပေါ့မေတ္တာရေးမှာမကြာခနဆိုသလိုစကားများရန်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခရီးထွက်လိုသူများသွားရတတ်ပါတယ်ဘာပဲလိုချင်လိုချင်လွယ်လွယ်ကူကူမရတတ်ပါတယ်မိတ် ဆွေသူငယ်ချင်းဆွေမျိုးမိဘချစ်သူအိမ်ထောင်ဘက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဂရုတော့စိုက်ရမယ်ငွေဝင်ကိန်းတွေတော့ရှိပါတယ်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။ယတြာဆန်ဖြင့်ငှက်စာကျွေးမွေးပြီးဆုတောင်းလိုက်ပါ။ ဗုဒ္ဓဟူးရာဟုသားသမီး ဗုဒ္ဓဟူး+ရာဟုသားသမီးများစီးပွားရေးလုပ်နေသူတွေအတွက်ဒီကာလမှာ စီးပွားရေးကို နိုင်နိုင်နင်းနင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အပြိုင်အဆိုင်အတားအဆီးမနာလိုသူများ ရှိပါတယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှဝင်ရောက်နှောက်ယှက်နေရတတ်ပါ။မေတ္တာရေးမှာတော့အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။မိမိရဲ့သက်ဆိုင်သူကိုအခုချိန်မှာ စကားကောင်းကောင်းပြောပါချော့ပြောပါဒါဆိုရင်အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ပြည်ပခရီးသွားလိုသူများသွားရတတ်ပါတယ်။ဒီကာလမှာတော့အနည်းငယ်စိတ်လေနေရတတ်ပါတယ်စိတ်ညစ်နေရတတ်ပါတယ်။ယတြာဇီးသီး၈လုံးဘုရားကပ်၍မိမိလိုသောဆုကိုတောင်းပါမည်သည့်ဇီးသီမဆိုရပါတယ်။ ကြာသပတေးသားသမီး ကြာသပတေးသားသမီးများဒီကာလမှာကြာသပတေးသားသမီးများအဖို့ကံကောင်းလာပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်လုပ်ငန်းတွေတိုးတတ်မယ်လုပ်ငန်းတွေချဲ့ရမယ်စီးပွားရေးနဲ့ပက်သတ်လို့အစွမ်းလုပ်သင့်ပါပြီဒါပေမယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့ချပါတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပါ။မေတ္တာရေးမှာစန်းပွင့်နေရတတ်ပါတယ်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ချစ်သူရှိရင်အိမ်ထောင်ကျတတ်ပြီးချစ်သူမရှိသူချစ်သူရမယ်အိမ်ထောင်ကျပြီးသားသူမျာသားသမီးလိုလားရင်သားသမီးရတတ်ပါတယ်။အဝတ်တန်ဆာများဝင်လာတတ်ပါတယ်လက်ဆောင်ရတတ်ပါတယ်တစ်ခုတည်းကိုပဲဇောက်ချလုပ်ကိုင်ပါ။ယတြာသပြေ(သို့မဟုတ်)သစ်ခွ၃ညွန့်ဘုရားကပ်လှူ၍ဆုတောင်းပါ ။ သောကြာသားသမီး သောကြာသားသမီးများဒီကာလမှာ ပြောင်းရွှေ့ရကိန်းတွေရှိပါတယ်အလုပ်ပြောင်းအိမ်ပြောင်းခြံပြောင်းနယ်ပြောင်းတွေရှိပါတယ်သတိထားရမှာကဒီကာလမှာစိတ်တွေလေနေရတတ်တယ်အလုပ်ထဲမှာလဲစိတ်မဝင်စားသလိုဖြစ်နေရတတ်ပါ။မေတ္တာရေးမှာ
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်မှ ဩဂုတ်လ ၃ ရက် အထိ 1 တနင်္ဂနွေ အလုပ်အကိုင်သစ်များ ပေါ်ပေါက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းကိစ္စ ကြိုးစားခြင်းတို့ ကြုံမည်။ ငွေကြေး အခက်အခဲ ဖြေရှင်းရန် ရုန်းကန်ရလိမ့်မည်။ မိသားစုအတွင်းရေး ရှုပ်ထွေးနေလိမ့်မည်။ သို့သော် အလွန် ဆိုးရွားခြင်းတော့ မဟုတ်ချေ။ အဝေးမှ မိတ်ဆွေဟောင်း ပြန်လည်